ဒူဘိုင်းမြို့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်နိုင်ငံခြားရေးယောဘသည် VACANCY 🥇
ဒူဘိုင်း & တက္ကစီယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကတော့ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်းမှပဲ့ပြင်
ဇန်နဝါရီလ 29, 2018
နိုင်ငံခြားရေးယောဘသည် VACANCY ။ ဒူဘိုင်းမှဂရိတ်ထွက်ပေါက်။ ယူအေအီး ကျွမ်းကျင်သူများအိပ်မက်အလုပ်ဆိုဒ်များ။ သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့ ဒေသခံအလုပ်သမားတွေအတွက်အံ့သြဖွယ်အကြံပေးချက်များ။ အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ဆောင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌စုံလင်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေပါ။
နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်နေရာလွတ်ယူအေအီးနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသို့ပြောင်းရွေ့ကြပြီ။ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 မှတက်သစ်နေရာလွတ်နှင့်အတူစီမံကိန်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ Find ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများတလွှားအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများနိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အစျေးကွက်ဝင်တိုက် ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအဖွဲ့များအပေါ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့ယူအေအီးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနေထိုင်နေကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ်, ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကယူအေအီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် 80% ကျော်ကိုနေရာချပြီးပြီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်လွှာs. ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် Start။ ကျနော်တို့ယူအေအီး၌ရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူများတိုက်တွန်းပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်အလားအလာကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေရန်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အစဉ်အမြဲပွင့်လင်း။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေသူမှသာလူတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သန်းအလုပ်ရှာဖွေသူများယူအေအီးအတွက် 4-5န်းကျင်ရှိပါတယ်။ လစဉ်လတိုင်းပဲသငျသညျအဘယ်သူတူ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အအိပ်မက်ကိုမြင်။ ဒါကြောင့်သင်သေချာတခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုသည်ဟုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။ သူတို့ကမှ, သင်ကကူညီပေးနေလက်ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရယူခြင်း။ ကံမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းကြဘူး, အခြားသူများကဲ့သို့ဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဖြစ်စေသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ကိုရယူပါ။
စူပါအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ပါကမရှိတော့ကွာအလုပ်ကနေဆက်နေရန်သဘာဝကျပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ဖြစ်ခဲ့သည် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်။ နေ့တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူယူအေအီးထံသို့လာကြ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကမ္ဘာ့ကျြမှောကျခတျေအလုပ်ရှာဖွေသူများလည်းကာတာနိုင်ငံနှင့်ယော်ဒန်မြစ်ကိုချစ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အင်္ဂလိပ်စပီ။ ဒါ့အပြင်ရှိခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတှေ့ရရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွေကို။ အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်ဥရောပကနေအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများ။
ယူအေအီးအတွက်အဓိကအလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယကနေလူများအတွက်တစ်ဦးဘဝတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစု အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အမြဲနှိမ့်ချနဲ့သူ့ကံကြမ္မာရှာအံ့သောငှါအဆင်သင့်တဲ့နောက်ခံနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါနှစ်များတွင်ငါတို့သည်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း၏ကြီးထွားလာနံပါတ်များ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအမြဲအတော်လေးအပြုသဘောဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း။ လည်းသူတို့ပဲနီးပါးအမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အဘူဒါဘီကတည်းကနှင့် ဒူဘိုင်းအတော်လေးစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ ယူအေအီးအစိုးရသည်အသစ်များငှားရမ်းသည် နိုင်ငံတကာအလုပ်များ ရှာသူ။ ပြီးတော့သူတို့ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအလုပ်အကိုင်ရှာနေကြတယ်။ တကယ်တော့မှာတော့ ဒူဘိုင်းအလုပ်အဘို့ကြီးသောပါ!။ သငျသညျအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးအများကြီးပိုမြန်ရာထူးတိုးခံရလို့ပဲ။ ထိုသို့သောပင်ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများသို့နှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်လျှင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ဘ်နှင့်ကုမ္ပဏီများ.
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်န်းကျင် 8.6 သန်းခန့်မှန်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေသူ။ လူအများ၏အများစုမှာ အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှအကျိုးအမြတ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ယူအေအီးအတွက် 9.2 သန်းလူဦးရေများမှာ ကျွမ်းကျင်သူများ.
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်တို့သည်လည်း အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းများ။ ယူအေအီးအစိုးရမှအရသိရသည်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် 2020 ကုန်စည်ပြပွဲအထိဖွင့်အများကြီးပိုအလုပ်အကိုင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့နောက်ဆုံးပေါ်ခန့်မှန်းချက်။ ကြောင်းဖေါ်ပြသည် စုစုပေါင်းရာခိုင်နှုန်းပဲ 20% တက်အောင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှဘောဂဗေဒ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများလှုပ်ရှားမှုများ။
ယူအေအီးအကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ အဆိုပါ GCC အတွက်အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောမြို့ကြီးများဆင်ခြင်၏။ အများအပြားပြည်တော်ပြန်များအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အချက်။ နိုင်ငံတကာကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, အချိန်ယူပါ။ သငျသညျရှိခြင်းနေကြသည်ဘယ်လောက်ကောင်းအတွေ့အကြုံအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။6လအတွင်းအချိန်န်းကျင်ကိုယူပြီးနျ Standard အလုပ်ရှာဖွေရေး။ တောင်မှကဲ့သို့သောအခြေခံအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
သို့သော်အပြုသဘောဘက်ပေါ်မှာ။ သငျသညျနိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အထဲကနေရှာဖွေနိုင်သည် အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းပေါ်မှာငါတို့ဘလော့ဂ်ဒူဘိုင်းမှာ။ အထူးသဖြင့်သင်ကပြည်ပမှာအခြေစိုက်နေလျှင်။ သင်ဆဲနိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကဏ္ဍများကိုသင်အလုပ်ရှာနေသည့်အနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ အဘယ်အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍသင်၌ရှိကြ၏အလုပ်ရနိုင်သည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ပိုမိုရှေးရိုးစွဲနိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဆော်ဒီအာရေဗျ, ကာတာသို့မဟုတ်ပင်ကူဝိတ်။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်း, အမှုဆောင်အရာရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထားရန် အမ်းမရိတ်အတွက်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ သည်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ရုံးခန်းရှိသည်။ ကြောင်းပေါ် base သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မယ့်အခွင့်အလမ်းများ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်ရှိခြင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံကို။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, နောက်ကွယ်မှသူတို့၏မိသားစုများထွက်ခွာအများအပြားအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ သူတို့ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်နေကြသည်ပြီးနောက်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ကတက္ကစီယာဉ်မောင်းအဖြစ်ရိုးရှင်းသောအလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်သမားကစတင်ဘို့ ok ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပွဲချင်းပြီးယူအေအီးမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျအနိမ့်လုပ်ခအပေါ်စတင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ခဝင်ငွေကြောင့်အခြားသောလမ်းထားရန် ကျိန်းသေသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းမှာတော့သင်ကအခွန်လွတ်လစာဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်အိမ်သို့ပြန်ပိုက်ဆံပို့လိုက်ပါ။ နှင့်သင့်မိသားစုပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းကိုကလေးတွေပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အချို့စဉ်းစားကြည့်ပါ ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအတွက်အလုပ်အကိုင်များ။ အင်တာဗျူးရသွားမလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေ, သင်သည်သူတို့၏ရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်ရနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု သင်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နိုင်ငံခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာလွတ် ကဏ္ဍ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုပြီးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ကြသည်။ တဖန်သင်တို့ဒေသခံယူအေအီးအလုပ်ဈေးကွက်ကိုကျော်ခိုင်ခံ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်များမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ဘို့စုဆောင်း လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။ သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေအလုပ်ရနှင့် Skype ကျော်အင်တာဗျူးရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားဘို့မတ်စောက်အတူ။ တစ်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်ကိုသင်သတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အလွန်စျေးကြီးသည်။ ယူအေအီးအစိုးရနိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်ပြည်သူပိုင်လုပ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာ, အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ ယခုဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ထားတဲ့ပိုလွယ်လမ်းရှိခြင်းနေကြသည်။
အဆိုပါလုပ်သားအင်အားနှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အနိမ့်အလုပ်အကိုင်အနှုန်း၏ရလဒ်အဖြစ်။ အဆိုပါ ယူအေအီးပြည်တော်ပြန်ဖိတ်ခေါ်စတင်ရန်။ GCC နိုင်ငံတွေထဲကနေမသာ။ ပြည်သူ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေစတင်ပါ။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအလှနျကောငျးတှေ့ရှိနိုငျ မော်တော်ယာဉ်အတွက်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ဒါကြောင့်သင်ကသင်၏ CV တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကရေးသားရပါလိမ့်မယ်သေချာပါစေ။
သိသိသာသာမရတိုင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရှိသွားတဲ့။ ထိုမှတပါး, ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလာပြီနေကြသည်။ ယူအေအီးထွက်ခွာသူတို့ထဲကတချို့က။ ရိုးရှင်းစွာအမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံပါစေ။ ဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောလာ ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ coupled။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ။ နေဆဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြံထက်တိုးပွားလာ။
သူတို့အခွအေနမြေိုး, မြေတပြင်လုံး ဒေသကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အိပ်မက်အရပ်၌ရှိ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, တစ်ဦးဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စုဆောင်းရေးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစောင့်ဆိုင်း။ ဒါပေမဲ့တချို့သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည် ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းထားခဲ့ဖို့ရွေးချယ်ရာတွင်နေကြတယ်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့ကိုအသက်ရှင်ရန်အဘို့အလမ်းအရမ်းစျေးကြီးဖြစ်လာသည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ဒီကိစ္စမှာ အချို့အလုပ်ရှာဖွေသူများ Uber အတွက်အပိုအလုပ်အကိုင်များလာပြီ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ် ဘွဲ့ရ။ ထိုသူအချို့တို့သည်အဘို့, လုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် ဆရာအဖြစ်ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့လစာနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းခြင်းမရှိတော့ပါ, စကားပြော။ သူတို့ကအလုံအလောက်စမတ်ဖြစ်ကြပြီး ပိုလန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ ထိုသူတို့ကအနောက်တိုင်းန်ထမ်းမှအနိမ့်လုပ်ခပေးဆောင်ကိုစတင်ပါ။
ယခုကြှနျုပျတို့မှရှာကြသည် အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများစုဆောင်း။ ကျနော်တို့နှင့်အတူစာချုပ်အနည်းငယ်ရှိခြင်းနေကြသည် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ သင်မှတ်မိနိုင်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ ဒူဘိုင်းဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload။ သင်ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ယူအေအီးသွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှ CV ကိုပေးပို့ သင်ဘွဲ့ရကျောင်းသားမှန်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစုဆောင်းရေးအမြဲပြောနေ။ အဆိုပါ နေရာပြောင်းရွှေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်လုပ်နေပါသည်။ မဟုတ်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများသည်။ ဒါကြောင့်သေချာသင်အလုံအလောက်စိတ်ဝင်စားပါစေ။ တဖန်သင်တို့အိန္ဒိယလျှင်သို့မဟုတ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာနေတောင်အာဖရိက။ ကျိန်းသေ, သငျသညျသငျ့လျြောသောအရပ်ဌာန၌ရှိကြ၏။
နိုင်ငံတကာအများစုဟာ ခေါ်ဆိုခစင်တာအလုပ်လုပ်အမှုဆောင်အရာရှိ။ ယခုပင်လျှင်ဒူဘိုင်းမှအလုပ်အဘို့မိမိတို့နေအိမ်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့။ အထူးသဖြင့်အာရှလုပ်သားများ ပါကစ္စတန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းနေသောကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများ၏ရလဒ်များကိုလာပြီ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်, ဤနည်းကိုအမြဲတမ်းသငျသညျမကူညီ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်မြေယာ။ သငျသညျရှိရရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်တစ်ခုရဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိခြင်းပါကစ္စတန်ဧည့်သည်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးမြို့လယ်သို့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်သင့် CV ကို drop နှင့်ကြိုးစားကြ ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်အင်တာဗျူးသွား။ ဒီအဟောင်းများကိုလမ်းမျိုးသို့သော်အလုပ်ရှာဖွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ တခါတရံမှာအဟောင်းလမ်းကအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အချောအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်အနာဂတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ပြကူညီပေးပါမည် အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်ရှင်များ.
ယခုသင်မေးဖို့သင့်တယ် hတစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ ow?။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်စတင်နိုင်ချင်ပါတယ်တဲ့သူမဆိုလူတစ်ဦးများအတွက်ကံဆိုး။ အဆိုပါဗီဇာယူအေအီးနေထိုင်စတင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, တစ်ခုတည်းသောဗီဇာသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ဗီဇာဖြစ်ပါတယ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ကစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအသင်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီး အကြံပေးချက်များနှင့် ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားများအတွက်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျအခြို့သောအသိကိုရရှိနိုင်သည်။ အဘယ်သို့တွင် ပါကစ္စတန်အလုပ်သမားများကိုယူအေအီး၌ထားနိုင်ပါတယ်.
ok, ငါတို့ယခုနိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာလွတ်ရှာဖွေနေလွန်းယေဘုယျကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်အရှိခြင်းနေကြသည်။ ထို့အပြင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေလိုသူသည်အခြားလုပ်သားများလည်းရှိပါတယ်လို့ပဲ။ ဥပမာ, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာနေကြသူဖိလစ်ပိုင်ကလူ။ အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်နေရာချထားရှာနေနှင့်ကာတာတောင်မှဆော်ဒီအာရေဗျကျွမ်းကျင်သူများ။ ရိုးရှင်းသောယူအေအီးနေဆဲအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ဥပမာ, အများကြီးဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုလွယ်ကူအလုပ်ကိုယ်စျေးကွက်မှ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးအချို့အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏အသေးစိတျမှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသင့်အီးမေးလ် box ကိုကူးလာရန်ကမ်းလှမ်း။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, သင်အဘယ်သူအားမျှစံစုဆောင်းမှု tools တွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ & ်ထမ်းခေါ်ယူမှုသတင်းအချက်အလက်များ။ သင် invitation link များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိ။ ထိုအခါဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူ, သင်နောက်ဆုံးတော့စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့်အတူတိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယင်းမှအလုပ်တစ်ခုလွတ်ဘို့ Apply In-တိုက်ရိုက်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ.
သင်တို့သည်လည်းရှာဖွေစုဆောင်း၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသလဲ? နိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာလွတ်ရှိသနည်း။ အဘယ်အရာကိုအလုပ် site ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုပို့စ်တင်ယူအေအီးအတွက်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးနောက် ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထား။ ကြောင်းအားလုံးကျိန်းသေယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အခွန်လွတ်အလုပ်အကိုင်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းအရှိန်မြှင့်။
နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်အလုပ်အကိုင်အများအပြားကဏ္ဍများနှင့်အတူလာ။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ အခြားသူများထက်အများကြီးပိုလွယ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အသစ်ပြည်တော်ပြန်သည့်အတိုင်းဤအလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် အလုပ်အတွက်အလျင်မြန်ဆုံး option ကို။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်ဖို့လူသစ်အားပေး။
ဒူဘိုင်းမြို့များတွင်တစ်ဦးမှော်မရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်အဓိက။ ဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီများသည်လပေါင်းများစွာအဘို့ငှားရမ်းထားပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကျိန်းသေရေရှည်စာချုပ်အဖြစ်ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်အယူသငျ့သညျ။ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားအလုပ် ပြည်တော်ပြန်များအတွက်နေရာလွတ်လူတိုင်းဖွင့်ထားကြသည်။ သငျသညျယူအေအီးကူးလာကြလိမ့်မည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်နှင့်အတူငွေစုတွေအများကြီးယူပါ ယူအေအီးစျေးကြီးသောကွောငျ့.
အရှုံးမပေးနှင့်အမြဲလမ်းလျှောက်-in ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းရရန်ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ် LinkedIn အပေါ်သလောက်စုဆောင်းမန်နေဂျာတို့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်ပါ။ လူကြီးမင်း၏ CV ကိုအလွန်အကျွံပိုပြီးအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ Upload လုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Bayt နှင့် Careerjet ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့် လုပ်ငန်းရှင် များမှာ ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်း နေ့တိုင်း။ မေးခွန်းကသူတို့စားပွဲခုံပေါ်တွင်သင်၏လျှောက်လွှာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် ?.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။